Mpamatsy sinoa tsara indrindra namboarina vy maty voapaika volamena Lapel Badge mpanamboatra sy orinasa | Hobrin
Mpamatsy sinoa namboarina metaly maty nanapaka volamena Lapel Badge
● Fanodinana: Misandoka
● Fitaovana: vy / varahina
● Fitaovana: satroka pin / lolo / bobongolo plastika / satroka andriamby
Ho an'ny fisehoana kanto amin'ny badge metaly vy metaly rehetra, Dongguan Hobrin Badge ary Gift Co., Ltd no safidinao tsara. Tsy misy toa ny badge pin badge izay taratry ny fahatsorana madio sy ny hakantony ambany. Raha fintinina dia maharitra mandrakizay izy ireo. Ny endriny mahazatra sy ny fisehoany miavaka dia mahatonga azy ireo ho tian'ny orinasa sy fikambanana tsy mitady tombom-barotra.
Ny tsimatra maty manokana lapel dia manana fampiasana sy fiasa maro. Matetika izy ireo dia natsangana ho valisoa mandritra ny taona maro amin'ny asa fanompoana ary valisoa ho an'ny mpiasa miavaka. Ireo andrim-pianarana dia mampiasa ireo marika ireo amin'ny lanonana fizarana diplaoma ho fomba fahatsiarovana ny zava-bitan'ny mpianatra. Ny paosin-kesika namboarina ho tandindon'ny zava-bita dia lasa fahatsiarovana sarobidy ho an'ilay mpandresy tamin'ny loka manokana.
Ny pin custom die lapel dia vita amin'ny famoronana die amin'ny alàlan'ny famolavolana safidinao. Ampiasao avy eo ny maty mba hametahana ireo tadinao. Ny vy na varahina dia ampiasaina satria ny natiora malefaka amin'ireny metaly ireny dia mamela fametahana maranitra sy amin'ny an-tsipiriany. Avy eo dia ampiasao fitaovana fanapahana (milina fanaovana totohondry) hanapahana ny endrika ivelany amin'ny vodin-tsolika. Raha ilaina dia ampiasaina ny sandblasting mba hamoronana firafitra na background "sandblasting" hahazoana antoka fa "miavaka" ireo ampahany vy natsangana tamin'ny vokatra. Avy eo poloney ny haavon'ny tendron'ny vodin-tsavony ho toy ny fitaratry ny fitaratra, raha afaka mitazona ny firafiny kosa ny any aoriana. Izany dia manome endrika faran'izay karazana firavaka amin'ny tendron'ny ravin-taratasy sandoka maty. Farany, afaka misafidy kojakoja mety ianao, toy ny lapel pinles, fanjaitra puncture, cufflinks, fantsom-pifandraisana, andriamby, sns.
Ny fomban'ny badge bad metal dia mamela ny fisehoan'ny sarinao na ny volavolao voasokitra eo ambonin'ny metaly maty. Izany dia miteraka fiheverana ny firavaka sokitra, izay manaitra. Ny antsipirihany tsara sy ny famaranana avo lenta dia manome endrika "kalitao firavaka" ireo marika famantarana ireo ary tsy misy vidiny lafo. Ny fisehoan'ireto pin ireto dia miavaka amin'ny endrika matte ambonin'ny sy ireo faritra voakarakara. Ho fanampin'izany, ny tsimatra boribory dia azo tsaboina amin'ny loko fahagola. Fa na inona na inona dingana famaranana nofidinao ho an'ny tsimok'aretinao, dia mihatra ihany ireo fenitra avo lenta.
Ny pin lapel namboarina namboarina dia mitovy tanteraka amin'ny pin enamel malefaka tsy misy enamel miloko, koa raha mila brooch metaly feno tsy misy loko enamel sy sanda ambany ianao dia ny fizotran'ny badge no no safidy tsara indrindra. Ny felam-paosin-koditra vita amin'ny endriny dia tsara tarehy, kanto ary madio, noho izany dia azo ampiasaina ho toy ny asa kalitaon'ny firavaka matihanina.
Ny tsimatra manokana dia fomba iray tsara hampitana vaovao amin'ny fivoriana tsy manam-paharoa, ampahany, fampakaram-bady, sns. Nandritra ny 10 taona mahery, Dongguan Hobrin Badge sy Gift Co., Ltd dia nanampy ny olona eran'izao tontolo izao haneho ny hafatr'izy ireo amin'ny alàlan'ny tsindry manokana. . Ny famolavolana ny tsimatrao lapel dia mety ho toa asa sarotra, fa ny mpamoron-tsainay manam-pahalalana dia hiara-miasa aminao amin'ny famolavolana paingotra vita izay ireharehanao. Miaraka amin'ny safidy rehetra azo atao, mino izahay fa ho afaka hamolavola pin lapel izay mampiseho ny mombamomba anao, toa tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao
Teo aloha: Mpanamboatra sinoa faran'izay tsara fanao amin'ny enamel logo avo lenta vy fiarovana miaramila pin badge ny vidin'ny firaka zinc firaka embossed fanao pin sheriff vy badge
Manaraka: Mpanamboatra sinoa kalitao vita amin'ny nika mainty nopetahany takela-by vita amin'ny metaly volamena
Mpanamboatra sinoa avo lenta enamel ...
Mpanamboatra sinoa ambony kalitao mainty ...
Mpanamboatra sinoa avo lenta loko customi ...